विचित्र संसारमा रहेका समाचारहरु
जुम्ल्याहा शिशुका फरक–फरक बुवा !
चीन : एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चालाई जन्म दिएकी छन्, तर बुवा फरक– फरक भएको पत्ता लागेको छ । घटना चीनको हो । शिशुको डीएनए परीक्षण गर्दा बुवा फरक फरक भएको पत्ता लागेको हो । यस्तो पत्ता लागेसँगै चिकित्सकहरु पनि अचम्मित भएका छन् । जब दम्पत्ती आफ्नो बच्चाको दर्ताका लागि शियामेन प्रहरीकहाँ गए, त्यसपछि यो घटना सार्वजनिक भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । प्रहरीले दुबै जनाको डिएनए रिपोर्ट माग गरेको थियो...
गायकलाई अंगालो हालेको आरोपमा युवती गिरफ्तार !
एक्काइसौँ शताब्दीको यो युगमा केही मुस्लिम देशहरु महिला अधिकारको क्षेत्रमा कति क्रूर छन् भन्ने कुरा साउदी अरबको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ । साउदी अरबमा हालै एकजना गायकलाई अंकमाल गरेको अभियोगमा एकजना महिला दर्शक पक्राउ परेकी छिन् । साउदीको पश्चिमी सहर तैफमा शुक्रबार यो घटना भएको हो । त्यहाँ लाइभ कन्सर्ट भैरहेको बेला प्रस्तुती दिइरहेका गायक माजिद अल मोहन्जितलाई एक महिलाले स्टेजमै गएर अंकमाल गरेकी थिइन् । त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित महिला...
केटीहरु मोबाइलमा सवैभन्दा बढी के कुरा हेर्दा रहेछन् ?
काठमाडौं । प्रयोगकर्ताको सर्वेक्षण गर्ने हो भने महिला र पुरुष बराबर नै होलान् स्मार्टफोनहरुको प्रयोगमा। सजिलै उपलब्ध इन्टरनेट र स्मार्टफोनको सहायताले प्रविधिसँग युवा युवती दुवै उत्तिकै नजिक छन्। एक अध्ययनका अनुसार पुरुष भन्दा महिलाले स्मार्टफोनमा अश्लील सामाग्री बढी हेर्ने गरेको तथ्य सार्जजनिक भएको छ । पोर्न साइट पोर्नहबले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार ७१ प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ताले स्मार्टफोनमार्फत पोर्न सामग्री हेर्ने गरेका छन् । जबकि यो साइटमा स्मार्टफोनमार्फत पोर्न हेर्ने...
फोहोरको थुप्रोमा फालिएको शिशुलाई महिला प्रहरीले गराइन् स्तनपान
नयाँदिल्ली । फोहोरको थुप्रोमा छाडिएको नवजात शिशुलाई स्तनपान गराइ ज्यान बचाएपछि दक्षिण भारतको कर्नाटकमा एक महिला प्रहरीको सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।‘मैले त्यो देख्नै सकिनँ,’ उनले भनिन्, ‘मलाई मेरै बच्चा रोइरहेको जस्तो लाग्यो र बच्चालाई दूध चुसाएँ ।’ राजधानी बैंगलोरको एक निर्माण क्षेत्रमा फोहोरको थुप्रोमा उक्त बच्चालाई देखेपछि नजिकैका एक पसलेले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । शिशुलाई स्थानीयबासीले सरकारी नाम दिएका छन् । स्थानीयहरुले उक्त शिशुको नाम कर्नाटकका मुख्यमन्त्री कुमारास्वामीको...
कुकुरलाई कुट्ने नेपालीलाई क्यानडामा नौ महिना जेल !
काठमाडौं, १० जेठ – क्यानडाको पिटरवर्गमा एक नेपालीलाई घरमा पालेको कुकुरलाई पिटेको आरोपमा ९ महिनाको कैद सजायँ सुनाइएको छ ।ग्लोबलन्यूजका अनुसार नेपाली मुलका दिप बिष्ट तीन पटकसम्म जनावरलाई दुर्व्यबहार गरेको आरोपमा दोषी ठहरिएका हुन् । यो सजायँ गत सोमबार पिटरवर्गको प्रान्तीय अदालतमा सुनाइएको थियो । त्यसअघिका अन्य तीन पटकको घटनामा भने प्रान्तीय अभियोजकको आग्रहमा उनको केस फिर्ता लिइएको थियो । बिष्टले कुकुरलाई लात्तिले हानेको र कुटेको दृश्यहरु उनको अपार्टमेन्ट बिल्डिङको सीसी क्यामेरामा...
एजेन्सी, २५ वैशाख । दुई मेमा जब जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवे र उनकी श्रीमती इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूको निजी निवासमा डिनरका लागि पुगे तब त्यहाँ उनलाई जुत्तामा खाना राखेर दिइयो । तर त्यो कुनै वास्तविक जुत्ता नभएर धातूको जुत्ता थियो । प्रधानमन्त्री नेतान्याहूका निजी तथा इजरायलका सेलिब्रेटी शेफले आवेलाई उक्त धातुको जुत्तामा उत्कृष्ट चकलेटहरु राखेर दिएका पेश गरेका थिए । जापानी संस्कृतिमा जुत्तालाई एकदमै अपमानजनक मानिन्छ । आवेले इजरायलको त्यस्तो कलात्मक...
जुन गुफामा देखिन्छ देवीदेवताको अनौठो आकृति
माघ २३,म्याग्दी । म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१ खानीगाउँमा अचम्मको गुफा फेला परेको छ । बीस मिटर लामो सो गुफामा जनावर, पक्षी, हातहतियार, हिमशृंखला, पहाड, तालतलैया, देवीदेवताका मूर्ति, घर आदिका आकृति रहेका स्थानीयले बताएका छन् ।पहाडको फेदीमा अवस्थित गुफाको अगाडिको भाग एक मिटर अग्लो भए पनि भित्री भाग तीनदेखि चार मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ । स्थानीय उदय रोकाले फेला पार्नुभएको गुफाको बारेमा जिल्लाभित्र र अन्य ठाउँमा जानकारी नभएकाले ओझेलमा परेको कुहुँका बासिन्दा...
चोरले सडकनै चोर्दा
माघ २२/ सडकमा गुड्ने गाडी चोरी भएको त बरु सुनिएकै हो । तर चीनमा भने सडक नै चोरी भएको छ । पूर्वी चीनको जिनाग्सु क्षेत्रस्थित सानकेशू गाउँमा गत जनवरी २४ मा ८ सय मिटर लामो सडक चोरी भएको हो। उक्त क्षेत्रमा चोरले रातारात ८ सय मिटर लामो कंक्रिटको सडक चोरेको रिपोर्ट पुलिसमा गरिएसँगै त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । स्थानीय मानिसहरुले चोरले सडक खनिरहेको पनि देखेका थिए । तर त्यो चोर भन्ने...
साइटहरुमा पोर्न सामाग्रीहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो
अमेरिकामा हालै फैलिएको एक हल्लापछि अचानक पोर्न साइटहरुमा पोर्न सामाग्रीहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । पोर्न साइटहरुको ट्राफिक यति बढ्यो की यसअघिका सबै पूराना रेकर्डहरु तोडिए । वास्तवमा हालै अमेरिकाको हवाई प्रान्तमा मिसाइल आक्रमण हुन लागेको गलत हल्ला आगोझैँ फैलियो । अचानक जारी भएको अलर्टपछि मानिसहरुमा तहल्का मच्चियो । तर पछि थाहा भयो की अमेरिकी सुरक्षा एजेन्सीका एक अधिकारीले गल्तीले अलर्ट बटन थिचेपछि मानिसहरुको मोबाइलमा यस्तो सूचना पुगेको रहेछ । मानिसहरु त्रतिस...
एक जना ठगलाई १३ हजार वर्ष जेल
एकजना ठगले १३ हजार २ सय ७५ वर्षको जेल सजाय पाएको छ । थाइल्याण्डको एक अदालतले यस्तो सजाय सुनाएको हो । ३४ वर्षको पुडिट किट्टीथ्राडिलोक उच्च मुनाफा प्रदान गर्ने भन्दै एउटा कम्पनी खडा गरी ४० हजार जना मानिसहरुबाट झण्डै १६ करोड डलर बराबरको रकम हात पार्न सफल भएको थियो । अवैध रुपमा ऋण प्रदान गर्ने लगायतका २ सय ६५३ वटा ठगीका घटनामा उनी दोषी ठहर भएका छन् । अभियुक्तले सुरुमा १३ हजार २...